Soo dejisan GoToMyPC 8.3.1611 – Vessoft
Soo dejisan GoToMyPC
GoToMyPC – software ah in si ammaan ah si ay xogta computer fog helaan. GoToMyPC siisaa difaac la isku halayn karo iyo sirta xogta isticmaalaya sirta ah hal mar iyo sugida laba qodob. Software ayaa awood u si ay ula qabsadaan heerka ay hadda waxqabadka, taas oo kuu ogolaanaya in aad reserved xawaaraha xidhiidhka iyo muuqaalka shaashada. GoToMyPC ayaaba riixo xogta si loo yareeyo waqtiga dib u dhac u dhexeeya kombiyuutarada macmiilka iyo ciidanka ka. Sidoo kale software ah ku siinayaan shaqada la kormeera badan in ku xiran yihiin computer hal. GoToMyPC ka kooban badan oo ah qalab si astaysto software ee baahida user ah.
Fast in xogta computer fog helaan
Ilaalinta xogta lagu xiray
File kala iibsiga
Tiro badan oo customizations
Comments on GoToMyPC:
GoToMyPC Software la xiriira:
Teamviewer 11.0.66695 Standard, QuickSupport iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... Plex Media Server 0.9.14.6
العربية, English, Українська, Français... GameRanger 1.0.0.0
English, Français, Español, Deutsch... Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet iyo Firewall